कोरोनामुक्त युवक पुनः अस्वस्थ, उपचार गर्न वीरगञ्ज ल्याइयो !
वीरगञ्ज – नारायणी अस्पतालबाट कोरोनामुक्त भई डिस्चार्ज भएका रौतहटका एक युवक पुनः अस्वस्थ भएपछि उपचार गर्न वीरगञ्ज ल्याइएको छ ।
रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाका १९ वर्षीय युवकको रिपोर्ट शंकास्पद देखिएपछि उनलाई पुनः वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमै ल्याइएको हो ।
स्वास्थ्यमा मस्या देखिएपछि शनिबार बेलुका उनलाई लिन स्वास्थ्यकर्मीको एक टोली रौतहट गएको थियो । रौतहटको इशनाथ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्द किशोर गुप्ताले कोरोनामुक्त भएर आएका युवकलाई पुनः वीरगञ्ज लगिएको पुष्टि गरे । ‘गाडीमा आएको एउटा टोलीले उनलाई पुनः वीरगञ्ज लगेको छ,’ गुप्ताले भने, ‘तर किन लगिएको हो भन्ने थाहा छैन ।’
नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदन उपाध्यायले भने युवकको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि ल्याइएको जानकारी दिए ।
युवकले आफूलाई अचानक अस्पतालबाट टोली गएर वीरगञ्ज ल्याएको बताए । ‘पहिला घर पठाए अहिले अचानक घरमा आएर सम्झाएर ल्याए, किन अस्पताल ल्याइएको हो केही बुझिरहेको छैन,’ उनले भने ।
कोरोना संक्रमितमा देखिने कुनै पनि लक्षण आफूमा नदेखिएको तर पनि डेढ महिनादेखि दुःख पाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना संक्रमितलाई ज्वरो आउँछ, स्वास प्रश्वासमा समस्या आउँछ भन्छन्,’ उनले भने, ‘तर मलाई डेढ महिनादेखि न खोकी छ, न सर्दी ज्वरो छ ।’
ती युवकलाई नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखिएको छ । अस्पतालमा ल्याइसकेपछि शनिबार राति पुनः उनको थ्रोट स्वाबको नमूना संकलन गरिएको छ ।